Degso 7-Zip loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (1.00 MB)
7-Zip waa barnaamij bilaash ah oo awood badan oo adeegsadayaasha kumbuyuutarradu ay ku cadaadin karaan faylasha iyo faylalka ku jira qaddiyaddooda adag ama ay hoos u dhigi karaan faylasha.
In kasta oo ay jiraan barnaamijyo badan oo faylasha lagu riixo oo suuqa ku jira, 7-Zip ayaa ah dookha koowaad ee adeegsadayaal badan sababtuna tahay qaabkeeda ballaadhan ee ballaadhan oo bilaash ah.
7-Zip, oo aad ku bilaabi karto adeegsiga kadib hawl aad u fudud oo rakibid ah, waxay kuu saamaxaysaa inaad si fudud u daawato dhammaan faylasha kombuyuutarkaaga oo aad hawlgallo iyaga uga hawl gasho si fudud ugana mahadceliso muuqaalka maareeyaha faylka.
Taageerida dhamaan feylasha la isku cadaadiyey iyo qaababka arjiga sida RAR, ZIP, TAR, GZ, LZH, LZA, ARJ iyo ISO, barnaamijku wuxuu sidoo kale hoos u dhigayaa qaabkiisa riixista ee u gaarka ah, 7z, wuxuuna si guul leh ugu cadaadiyaa faylashaada isla feyl kordhinta.
Waad ku mahadsan tahay barnaamijka si otomaatig ah isugu dhex galaya menu-ka midig-gujinta midig-Windows, waxaad ku kala-jabin kartaa faylashaada isku-dhafan dhowr guji, iyo sidoo kale inaad si fudud ugu cadaadin karto faylashaada iyo faylalkaaga dhowr guji.
Bixinta xalka ugu waxtarka badan ee faylka riixa iyo hoos u dhigista, 7-Zip wuxuu la yimaadaa software xaqiijin fayl dheeri ah. Qaabkan, waxaad si fudud ku arki kartaa in faylasha aad ka soo dejiso internetka ay yihiin kuwo asal ah ama in lagu farageliyay.
Gebogebadii, haddii aad u baahan tahay barnaamij bilaash ah, oo si sahlan loo isticmaali karo oo awood u leh isku-buufinta faylka iyo barnaamijka decompression ee aad ku isticmaali karto kombuyuutarkaaga, 7-Zip waa mid ka mid ah barnaamijyada ay tahay inaad isku daydo bedel ahaan WinZip.
Haddii kale, waxaad isku dayi kartaa Winrar.
Barnaamijkan waxaa lagu daray liiska barnaamijyada Windows ee bilaashka ah.
Cabirka Faylka: 1.00 MB
Horumar: Igor Pavlov